သူမငျးကို မခဈြဘူး … – Shinyoon
သူမငျးကို မခဈြဘူး …
July 9, 2021 by Shin Yoon
ဒါကိုလကျခံလိုကျပါတော့…အခြိနျတှေ ဘယျလောကျတောငျ ကွာခဲ့ပွီလဲ ပွီးတော့ ဘယျလောကျတောငျ နာကငျြခဲ့ရပွီလဲ တကယျဆိုရငျလေ အစောကွီးကတညျးက သိခဲ့သငျ့တာ အခုတော့လဲ နောကျတော့ မကသြေးပါဘူး ဒါပမေယျ့ တဈနကေ့ရြငျဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှနေဲ့ အခြိနျတှေ အမြားကွီး ဖွုနျးခဲ့မိပွီ ။
သူသာ တကယျခဈြရငျ ငိုစဖေို့မပွောနဲ့ မကျြနှာလေးညှိုးမှာတောငျ လိုလားမှာ မဟုတျဘူး ပဈထားဖို့မပွောနဲ့ အခြိနျတှေ မအားရငျတောငျ အားတဲ့အခြိနျလေးမှာ သတိတရလေး ရှိနလေိမျ့မယျ … ကိုယျ့ဘကျမှ စချေါရလို့ မဟုတျဘူး ဒါပမေယျ့ အမွဲတမျးခညျြး ကိုယျ့စချေါမှ အသကျဝငျတာမြိုးကြ မဟုတျတော့ဘူးလေ … လကျဆောငျပစ်စညျးတှေ မလိုအပျပါဘူး ဂရုစိုကျမှုလေးရှိခဲ့ရငျ နှေးထှေးပါတယျ .
သူ့ကို သိပျခဈြတယျဆိုတဲ့ စိတျနဲ့သာကပျတှယျနမေိတာလေ .. တကယျတမျးကတြော့ ကိုယျဘာဖွဈနလေဲ သူမသိတာကွာပေါ့ ။ ကိုယျငိုနရေငျ မကျြရညျလှယျလိုကျတာ အမွဲတမျးမကျြရညျကနြတောပဲ ဆိုတဲ့ စကားတှပေဲ ကွားရတယျ … ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတဲ့မေးခှနျးမြိုးဘယျတုနျးက မှ မမေးခဲ့ဘူး သူမသိခငျြလို့လဲ ပါမှာပါ ။
ကိုယျစကားမပွောတဲ့အခါ သူက ပိုပွီးတော့သာယာတယျ ကိုယျ့ဘကျကပဲ မြှျောရတာပါ ပွီးတော့ လှမျးရတာပါ ။ တဈနကေ့ရြငျတော့ ကိုယျ့အခဈြတှေ မွငျလာမှာပါဆိုတဲ့အတှေးတှနေဲ့ ရပျနခေဲ့မိတာ ကိုယျ့အတှကျကိုယျ ပွနျမကွညျ့ဖွဈတာတောငျ အတျောကွာခဲ့ပွီး ဒီနဒေီ့ရကျမှာတော့ လကျခံရတော့မယျ
သူတကယျ မငျးကိုမခဈြဘူးဆိုတဲ့ ကိုယျ့အတှကျကွညျ့ပွီးပွောတဲ့လူတှရေဲ့ စကားကိုပေါ့ … တခြိနျတုနျးက တဈလောကလုံးနဲ့ ဆနျ့ကငျြပွီး မငျးကို ခဈြခဲ့တယျ ခုတော့ ကိုယျ့နှလုံးသားကို ဆနျ့ကငျြပွီး ကိုယျ့အတှကျကိုယျ ပွနျကွညျ့ရတော့မယျလေ ။
သူမင်းကို မချစ်ဘူး …
ဒါကိုလက်ခံလိုက်ပါတော့…အချိန်တွေ ဘယ်လောက်တောင် ကြာခဲ့ပြီလဲ ပြီးတော့ ဘယ်လောက်တောင် နာကျင်ခဲ့ရပြီလဲ တကယ်ဆိုရင်လေ အစောကြီးကတည်းက သိခဲ့သင့်တာ အခုတော့လဲ နောက်တော့ မကျသေးပါဘူး ဒါပေမယ့် တစ်နေ့ကျရင်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ အချိန်တွေ အများကြီး ဖြုန်းခဲ့မိပြီ ။
သူသာ တကယ်ချစ်ရင် ငိုစေဖို့မပြောနဲ့ မျက်နှာလေးညှိုးမှာတောင် လိုလားမှာ မဟုတ်ဘူး ပစ်ထားဖို့မပြောနဲ့ အချိန်တွေ မအားရင်တောင် အားတဲ့အချိန်လေးမှာ သတိတရလေး ရှိနေလိမ့်မယ် … ကိုယ့်ဘက်မှ စခေါ်ရလို့ မဟုတ်ဘူး ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းချည်း ကိုယ့်စခေါ်မှ အသက်ဝင်တာမျိုးကျ မဟုတ်တော့ဘူးလေ … လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ မလိုအပ်ပါဘူး ဂရုစိုက်မှုလေးရှိခဲ့ရင် နွေးထွေးပါတယ် .
သူ့ကို သိပ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့သာကပ်တွယ်နေမိတာလေ .. တကယ်တမ်းကျတော့ ကိုယ်ဘာဖြစ်နေလဲ သူမသိတာကြာပေါ့ ။ ကိုယ်ငိုနေရင် မျက်ရည်လွယ်လိုက်တာ အမြဲတမ်းမျက်ရည်ကျနေတာပဲ ဆိုတဲ့ စကားတွေပဲ ကြားရတယ် … ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးဘယ်တုန်းက မှ မမေးခဲ့ဘူး သူမသိချင်လို့လဲ ပါမှာပါ ။
ကိုယ်စကားမပြောတဲ့အခါ သူက ပိုပြီးတော့သာယာတယ် ကိုယ့်ဘက်ကပဲ မျှော်ရတာပါ ပြီးတော့ လွမ်းရတာပါ ။ တစ်နေ့ကျရင်တော့ ကိုယ့်အချစ်တွေ မြင်လာမှာပါဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ ရပ်နေခဲ့မိတာ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ပြန်မကြည့်ဖြစ်တာတောင် အတော်ကြာခဲ့ပြီး ဒီနေ့ဒီရက်မှာတော့ လက်ခံရတော့မယ်
သူတကယ် မင်းကိုမချစ်ဘူးဆိုတဲ့ ကိုယ့်အတွက်ကြည့်ပြီးပြောတဲ့လူတွေရဲ့ စကားကိုပေါ့ … တချိန်တုန်းက တစ်လောကလုံးနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီိး မင်းကို ချစ်ခဲ့တယ် ခုတော့ ကိုယ့်နှလုံးသားကို ဆန့်ကျင်ပြီိး ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ပြန်ကြည့်ရတော့မယ်လေ ။
မငျးအကွောငျးမေးမယျ့လူတှနေဲ့ မတှအေ့ောငျ ရှောငျတယျ ။
မကျြရညျလှယျတဲ့ ကောငျမလေး …